Hlela shazi i-SUV engcono kakhulu yeRussia nezimo zayo ezinzima kunzima kakhulu. Phela, indlela abadayisi abaqondiswa ngayo kuleso simo ngasinye, zonke zihlukile. Kodwa uma udinga imoto emgwaqweni ongekho emthethweni, engeke ibe yinhle nanoma yiziphi izindawo zokuhlala zasezulwini nezamanzi, sekuyisikhathi sokunaka wonke ama-model drive, hhayi kuma-SUVs. Emva kwakho konke, njengoba wonke umuntu uyazi, kusukela ebuntwaneni, eRussia kunezinkinga ezimbili zendabuko kuphela, futhi uma okokuqala kuxazululwa ngaphandle kwezinkinga yi-papha ye-asphalt, eyesibili ibuyele esikhathini esedlule, ibe ngumcebo kazwelonke. Mhlawumbe, ngenxa yalokhu, bonke abashayeli bezimoto abafuna ukuzivikela ezinqabeni zeqhwa ezingalindelekile eziwela njengeqhwa ekhanda lakhe ebusika, futhi bakhetha ukungesabi ukushiya ithayi emigodini yezinkombandlela, babheka emotweni nazo zonke amasondo okushayela kanye nokuvulwa komhlaba. Ngaphezu kwalokho, imoto ezosebenza kulo msebenzi ohlangene, akudingeki njalo uhlangabezane nezidingo ze-premium ingxenye. Ukulula komklamo nokuthembeka kwayo, ukulondolozeka, ukutholakala kwezingxenye kanye nezingxenye - lezi yimingcele esemqoka okufanele ihlangabezane nezimoto ezingekho emgwaqeni zaseRussia. Ngempela, akuyona into entsha kunoma ubani esikhathini esidlule ezweni elihle kakhulu lapho senze khona ukuhlala nawe, kunezinhlobo ezimbili kuphela zokuthuthukiswa kwezenzakalo: okungenakwenzeka futhi okubi kakhulu - futhi kubhekwa njengento enhle ukulungiselela lokhu isikhathi eside. Ngakho ngeke siphule amasiko futhi sibheke imoto ngenani lebhajethi.
Ngokwesiko, izimoto ezishibhile kakhulu ezisemgwaqeni eRussia zisetshenziselwa ukuzingela, ukudoba, ukuhamba ezindaweni ezimbi. Bathembekile futhi beqiniso bakhonza abanini babo, futhi bafanelwe ukuqashelwa okudumile. Ake sicabangele ingxenye yabo ngokuningiliziwe.
Intengo: kusuka ku-479950 thinta. - nge injini yephesolini, kuze kube ngu-549950 ruble. - ekhethekile nge injini ye-diesel.
Umkhulu wemboni yaseRussia, owenza umsebenzi wokupaka amapulasitiki angaphambilini we-Ulyanovsk Automobile Plant kanye neminye yamayunithi, ngokuzithemba angena ezimotweni ezithandwa kakhulu eRussia. Inzalo ye "imbuzi" evelele, eyayiyibheka njengemoto engcono kunazo zonke zezinkanyezi, abahlola kanye nabamele abanye abaqeqeshiwe abangakwazi ukuhlala phansi ngokusho kwemisebenzi yabo. Ukuvulwa komhlabathi ophezulu ngokulingana nokuxhuma kwe-wheel-wheel, amasondo amakhulu amasondo kanye nesimo esiqinile esiyi-geometric akumvumeli ukuba athole imizuzwana eyikhulu emizuzwini emihlanu, kodwa emgwaqeni lapho i-asphalt iphela khona, ingaphezu komncintiswano. Isiqubulo sakhe: kancane kancane kodwa ngokuzethemba - ngoba awusheshe usheshe?
Inani lentengo yesithathu emnyango livela kuma-ruble angu-364,500 kuya ku-375,200, ama-ruble angu-389500-400000. - emnyango emihlanu.
Kunjalo lapho ihhashi elidala lingalimazi umlotha. Ngemuva kwalokho, ibhizinisi elibi kakhulu e-Togliatti likhiqiza lezi zithombe ezibonakalayo kusukela ngo-1977, futhi zisadingeka. Kuphela ngo-2006 amaSUV aseSweden aphansi kakhulu adlulisela igama lawo elidumile e- Niva ku- flagship entsha yomugqa. Phakathi nokuthuthukiswa komshini, kwenziwa izinguquko eziningi ezakhayo: ukuguqulwa kwe-propeller shaft kuncishisiwe, umsebenzi wokumiswa wawuhlelwe kahle, ukukhishwa kwe-absorber nge-stroke eyengeziwe kwafakwa, isondo lokuqondisa labe selizwela kakhulu. Yiqiniso, izici zemvelo zezimoto ngenxa yokuma kwayo ziphakeme kakhulu, kodwa ku-asphalt, lapho ijubane lidlula ikhulu, imoto ilalela ngokuzethemba isondo, ngesikhathi esifanayo ngeke iwele emigodini ye-primer.
Intengo ixhomeke kokucushwa: ama-ruble angu-459 000-557 000.
Inzalo ehlangene kaVAZ noChevy cishe iyona engcono kakhulu ye-SUV yeRussia. Phela, kusukela ngo-2004 kuya ku-2008 wayengumholi wokuthengisa kule ngxenye. Le moto inomsebenzi omuhle wokushayela emgwaqeni nangaphandle kwayo. Kithi esifundazweni izimoto zakwazisa, zithokozwa ngentengo enengqondo, ukungathobeki emsebenzini nokuthembela kuyakwazisa. Futhi le modeli "i-wrapper" enhle ayifihleli kuphela kuphela amasondo amane okushayela nge-interlocking differential lock, kodwa futhi inokwakheka kahle i-1.7-liter ilolini injini. I-Airbags yomshayeli nomgibeli, isimiso sokulwa nokukhiya nezinye izikhungo kukuvumela ukuba uzizwe uqiniseka futhi ukhululekile.
I-Diesel ehlukile - kusuka ku-619900 kuya ku-675900 ruble., I-Gasoline - 519900-609900 ibhaqa.
Kubo bonke labo abakhumbula ngezikhathi zenkathi lapho utshani bebuhlaza, iTaganrog Automobile Plant yalungiselela isimanga esincane - ukukhuphuka emlotha weSsangYong Korando, kepha kwakudingeka ushintshe igama lakhe kuTagAZ Tager kanye nobuzwe. Kodwa akuyona into esemqoka, ngoba uma unesidingo esigcwele, imvume enkulu yomhlabathi, futhi ungadideli khona iTagAZ Tag kulezi ziRashiya ezinezimpande zemoto yaseKorea - ke lokhu kuyisinqumo sakho. Ngempela, izimoto ze-Tager zikhiqizwa ezifanayo nezokuqala, kunokuba zingekho izimoto ezintsha ezisendaweni zaseRussia?
Intengo, kuye ngokucushwa kanye nenani le injini - ama-ruble angu-719 000-899 000.
Kufanelekile ukunaka izimoto zabakhiqizi baseChina, ngoba i-Great Wall H5 isekelwe ekuthuthukiseni abakhiqizi bezimoto ezahlukene. Injini ikhiqizwa yi-Mitsubishi, uhlelo lusekelwe kuma-model we-Isuzu, kanye ne-chassis nokumiswa kusuka eToyota. I-Great Wall ifakwe injini ye-diesel noma i-essence enomthamo wama-2 no-2.4 amalitha, ngokulandelana. Imoto ibonakala ifanelekile emigwaqweni yedolobha nasemuva kwemvelo ngenxa yesimiso se-4 × 4. Lolu luhlaka lwe-SUV luhlomele zonke izinhlelo zokuphepha ezidingekayo futhi ngokuya kwedatha yokuhlolwa kwe-crash ithole izinkanyezi zayo ezine ngokuzethemba. Ngesikhathi esifanayo, i-salum volumetric ikuvumela ukuba uhlale kalula abantu abangu-5, futhi i-trunk - ukubeka konke okudingayo ukuze uthole ukuzilibazisa. Ngokuvamile, imodeli ye-H5 ingashiwo ukuthi lokhu akusiyo i-SUV engcono kakhulu yeRussia, bese kuba omunye wabaphikisi abakhulu kule ndima.
Intengo iqala kusuka ku-779000 kuya kuma-ruble angu-864,400. - kuye ngokuthi ibhokisi legiya.
Suzuki Jimny - lena "encane" encane ene-wheel drive ezine. Njengoba ubukhulu bayo buhlanganiswa, uzenza sengathi u-SUV ogcwele, ngoba usehlombe. Ngenxa yobungqingili bayo kanye nokukwazi ukusebenzisa kokubili ezindaweni zasemadolobheni nasemadakeni, ngokushesha wasithatha indawo yakhe futhi wajabulisa bonke abanikazi. Injini encane engama-1.3-litre ngeke imvumele ukuba ahlanganyele eParis-Dakar Rally kanye nemarathon eNingizimu Afrika naseLatin America, eyamlandela kamuva. Kodwa uJimny ngokuphumelela angabona izinzuzo zayo ezimweni ezinomusa kakhulu, ngoba imvume yomhlabathi wayo yi-190 mm. Futhi i-ABS ngeke ivumele umshayeli ukuba alahlekelwe emgwaqweni, kunjani isimo.
Ukukhuluma nge-SUV engcono kakhulu eRussia kufana nokuzama ukuphikisana ngalokho okwakukhona ngaphambili, inkukhu noma iqanda. Phela, izintandokazi zomthengi ngamunye zihlukile, futhi imoto ethengiwe kufanele isebenzise kahle injongo yayo. Ngakho-ke, isinqumo esifanele singenziwa kuphela kuwe.
Namathisela Blueberry: ukubuyekezwa kanye izicelo. namathisela Blueberry "Likberi": yokusetshenziswa
Esifanekisweni Diorite kaFaro. Khafre (Chephren) - umbusi wesine laseGibhithe